Akụkọ - Otu esi echekwa silinda nke hydraulic
Mee ezigbo ọrụ na nhicha, chọọ ịrụ ọrụ dị mma na mmezi nke hydraulic cylinder, mgbe ahụ ọ ga-arụ ọrụ dị ọcha nke nhicha. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa, hydraulic cylinder na usoro iji rụọ ọrụ ogologo oge ga-emepụta ọtụtụ uzuzu na nsị, ọ bụrụ na ehichaghị ya n'oge, ọ ga-emetụta ojiji nke ngwaahịa ahụ, yabụ na anyị ga-arụ ezigbo ọrụ na nhicha akụrụngwa mgbe ị jiri ya kwa ụbọchị, nke bụkwa usoro mmezi dị mma maka akụrụngwa a.
Nke mbu, a kwesiri igbanwe mmanụ nke hydraulic mgbe niile ma kpochaa nza nyocha nke sistemụ iji hụ na ịdị ọcha na ịgbatị ndụ ọrụ.
Nke abuo, cylinder mmanụ na ojiji ọ bụla, iji mepụta ndọtị zuru oke na mgbatị nke ule na-agba ọsọ maka ọrịa 5, wee jiri ibu na-agba ọsọ. N'ihi gịnị? N'ụzọ dị otú a, ikuku dị na sistemụ nwere ike ịgwụ, na usoro ndị ahụ nwere ike ịmalite. Ọnụnọ nke ikuku ma ọ bụ mmiri dị n'ime sistemụ ahụ nwere ike izere ihe omume nke mgbawa gas (ma ọ bụ ọkụ) na ngọngọ ahụ, nke ga-emebi akara ahụ ma mee ka nsị nke ime mmanụ ahụ dị.
Nke atọ, usoro okpomọkụ kwesịrị ịchịkwa nke ọma. Ọ bụrụ na mmanụ ọkụ dị oke elu, ndụ ọrụ nke akara ahụ ga-ebelata. Ọ bụrụ na ọnọdụ mmanụ dị oke elu ruo ogologo oge, akara ahụ ga-emebi kpamkpam ma ọ bụ bụrụ ihe na-adịghị mma kpamkpam.
Nke anọ, chebe elu mpụga nke piston ahụ iji gbochie mmebi nke akara ahụ site na bumping na ọkọ. Hichaa mgbanaka uzuzu nke akara ike nke cylinder mmanụ na sedimenti na mkpanaka piston ahụ ekpughere, iji gbochie unyi n'elu nke piston mkpanaka ịbanye na cylinder mmanụ ma mebie piston, cylinder ma ọ bụ akara.
Nke ise, lelee eri, bolt na akụkụ njikọ ndị ọzọ ugboro ugboro, ma kechie ha ozugbo ma ọ bụrụ na ha atọpụ.
Nke isii, na-etinyekarị akụkụ njikọta iji gbochie mmebi ma ọ bụ adịghị mma dị na steeti enweghị mmanụ.